moto z force droid vs apple iphone 6s plus
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo I-Moto Z Force Droid vs Apple iPhone 6s Plus
I-Moto Z Force Droid vs Apple iPhone 6s Plus
Abavelisi be-Smartphone bahlala bejonge ukuba babe phakathi kwabokuqala ukuzisa abasebenzisi into enkulu elandelayo. Ngamanye amaxesha ezo ntshukumo zihlawula, kwaye izinto ezinje ngokunyuka kwezixhobo ezinobungakanani be-phablet, ukubuya kwezikena zeminwe, kunye nenkxaso yokutshaja ngokukhawuleza ziye zangena ngokukhawuleza kwezona ziqhelekileyo. Ngamanye amaxesha sifumana i-swing-and-a-miss, kunye ne-tech efana ne-autostereoscopic 3D shows isilela ukubamba nangayiphi na indlela exabisekileyo. Okwangoku abenzi beefowuni baphinde bazama into entsha, njengoko ii-smartphones ezakhelweyo ukuba zisebenzise izongezo zehardware ezibonakalayo kwimarike. Kwaye kwiintsuku nje ezimbalwa emva, siqwalasele le nkqubo yamva nje ukuya kumdlalo wokuqala, kunye neLenovo & apos; Moto Z Droid, Moto Z Force Droid, kunye neeModyuli zeMoto zilungiselela ukufika.
Siye sachukunyiswa yimizamo yeLenovo kunye neapos apha, ngakumbi ngenxa yokuba iifowuni ezintsha zeMoto Z Droid azinomdla nje ngenxa yezixhobo zazo ezenziwa kakuhle; Bona & iiapos; ziphinde zibe nomtsalane kwiiflegi eziphathwayo ngokwazo. IMoto Z Droid ngokwayo iyathandeka ngokwakha okungacacanga, ngelixa i-Moto Z Force Droid ingena ishushu ngakumbi (ukuba ungatsalela umnxeba nje ngaphantsi kwe-7mm & ldquo; ubukhulu & rdquo;) kwaye ihambise ukuphuculwa kwebhetri yefowuni, ikhamera, kunye isikrini.
Sele sijonge indlela iMoto Z Droid egcina ngayo iMoto Z Force Droid, kodwa umzalwana omkhulu apho uthelekisa njani nezinye & ldquo; ziphuculwe & rdquo; iiflegi? Siye sajonga zombini i-Moto Z Force Droid kunye ne-iPhone 6s Plus ngethemba lokwenza izigqibo.
Kwindawo yentengiso apho kulula khona ukuvula ukugxeka i-smartphone entsha nge & ldquo; ejongeka ngathi ikhuphe i-iPhone, & rdquo; iphantse yahlaziya ukubona ubungakanani bayo i-Moto Z Force Droid elawula ukuzimela ngokwayo ngokwembono yoyilo. Olunye ukhetho, njengepaneli yangemva ethe tyaba emngxeni wokulahla kabukhali macala onke, ngokucacileyo sisiphumo sentshukumo yeLenovo kunye neapos yokuphumeza iiMoto Mods. Abanye, njengendlela umda womda oquka ukuphakama okuphezulu ukunceda ngomgangatho wokubamba, kubonakala ngathi bakhuthazeka kwenye indawo. Kodwa naphina apho onke la maqhekeza avela khona, bayongeza ekunikezeleni i-Moto Z Force Droid inkangeleko ebalaseleyo, engenakuphikiswa ukuba wena neapos akunakufane kwenzeke ukuba udibane nayo ngaphambili.
I-iPhone 6s Plus, okwangoku, yinto yokulingisa rhoqo kunoko, kodwa akukho mntu uyithandayo njengeyantlandlolo. Umgangatho wokwakha we-Apple kunye nowokugqibela ungowesibini, kwaye nokuba unescreen esikhulu se-intshi ye-5.5, i-handset kunye neeapos zisazimelele ngokuqinileyo. Ewe uvakalelo olunamandla luza ngexabiso, kwaye i-iPhone 6s Plus zombini zide, zibanzi, kwaye ziyangaphezulu kuneMoto Z Force Droid, kwaye ibinzima kakhulu - ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-20.
IMotorola Moto Z Force Droid Edition
6.14 x 2.98 x 0.28 intshi
I-Apple iPhone 6s Plus
6.23 x 3.07 x 0.29 intshi
Jonga i-Motorola Moto Z Force Droid Edition vs Apple iPhone 6s Plus yokuthelekisa ubungakanani okanye uthelekise nezinye iifowuni usebenzisa isixhobo soThelekiso soBungakanani.
Zombini i-iPhone kunye ne-Moto handset zixhotyiswe ngezikrini ze-phablet-class 5.5-intshi: I-Apple kunye neapos zisebenzisa iphaneli ye-1080 x 1920 LCD, kwaye iLenovo inendawo ephezulu ye-1440 x 2560 AMOLED. Ezo pixels zongezelelweyo azenzi kunye ne-apos; zikhokelela kulwahlulo lobusuku nemini ekucaciseni komfanekiso phakathi kwezi zimbini, kodwa zinika i-Moto Z Force Droid umda omncinci kwizinto ezinje ngokubonisa ngokwenyani okubonakalayo kwendalo.
Ngokubhekisele ekuvelisweni kwakhona kwemifanekiso, iApple & apos; s ibonisa umbala ongcono kancinci kunye nokuchaneka okumnyama, kwaye inokuvelisa abamhlophe abaqaqambileyo nabamnyama-loo ndawo yokugqibela iba neentloni ngakumbi kwifowuni esekwe kwi-OLED njengeMoto Z Force Droid.
Igalelo elibuthathaka lokuthintela amandla e-3D kwi-iPhone 6s Plus luphawu oluhle lwebhonasi, nangona lusilela ekubeni kufuneka ubenalo. Kwaye ifowuni yoMlilo ithatha into yayo eyongezelelekileyo, iqhayisa nge-ShatterShield yokwakha enganyangekiyo njengonyaka ophelileyo kunye neeapos ze-Droid Turbo 2. Ngelixa ngokuqinisekileyo singazicwangcisi ukuyokulahla iifowuni zethu zemihla ngemihla, ngokuqinisekileyo ezo zilungile ukuba lapho xa siyifuna.
(Egqwesileyo) 1: 1407
Iapile ipad pro 12.9 uphononongo
inikwe xa kukho imigaqo yokwamkelwa
IOS 14.5 beta ikuvumela ukuba usete iSpotify njengesixhobo sokudlala somculo
IBlackBerry ibuyile! Ifowuni entsha ye-5G enebhodi yezitshixo yeQWERTY ifika ngo-2021
I-AT & T Samsung Galaxy Tab S 8.4 LTE ifumana uhlaziyo lwe-Android 5.0.2 Lollipop
IWalmart & apos; ukuvuza kwephepha lomnyama ngolwesiHlanu; jonga ukujongana neefowuni, iitafile kunye nezixhobo